Ụlọ ọrụ nri anụ ụlọ |Ndị na-emepụta nri anụ ụlọ China, ndị na-ebubata ya
Ihe Nwa & Ụmụaka
Nwa eze eze
Ihe egwuregwu ụmụaka
Ihe Njide Ụlọ
Ute esi eme achịcha
Ihe mkpuchi silicone
Ihe dị n'èzí na egwuregwu
Silicone ịṅụ ahịhịa
Kalama njem silicon
Ngwaahịa anụ ụlọ
Nlekọta anụ ụlọ
Nri anụ ụlọ
Ihe ngosi mmepụta
Silicone gbapụta ya akpa pensụl ...
Ọrịra mmanụ silikone dị ọkụ...
N'ogbe Silicone Ime M...
Ihe ọṅụṅụ Popit Ubu Akpa
Ọkwa nri 15 obere oghere ...
Nkịta Ọzụzụ Nkịta hụrụ n'anya na-eje ije n'èzí na-eje ije Pet omenala ngwugwu obere akpa mmiri silikone Dog na-agwọ akpa
Nkọwa ngwaahịa 【Ọ dị mma yana ahụike】 Akpa ọgwụgwọ nkịta bụ nke silikone dị nro nwere ọkwa nri.Ọ dịghị egbu egbu, adịghị emerụ ahụ, nchekwa na ahụike maka gị na anụ ụlọ gị.【 Ọ dị mfe iji】 Akpa ọzụzụ anụ ụlọ nwere magnet na oghere mechiri emechi, nke dabara adaba na nke bara uru.Akpa nri nkịta na-enye gị ohere itinye nri na ọgwụgwọ na otu aka, wee pụta ịzụ anụ ụlọ gị ma mechie onwe ya.Gbaa mbọ hụ na akpa ọzụzụ anụ ụlọ anaghị apụ apụ.【Enwere ike ibufe na eriri eriri】 Wi...
Bowl Silicone dị elu dị elu Pet Feeder Placemat Snuffle Mat Anti-Spilling Dog Slow Feeder Bowl.
Ọ dị mfe ịsacha&ECO-FRIENDLY, A na-eji otu mpụ diski na-awụpụ mmiri.Ihe silicone na-enye ohere maka nnukwu efere ahụ iguzogide unyi na ájá.Naanị sachaa ngwa ngwa ma ị dị mma ịga.Ejiri silicone ọkwa nri dị elu mee ya, enweghị ndu yana BPA n'efu.100% dị nchebe pụọ na nsị na adaba iji dị ọcha.
2021 kwalitere mmiri na-adịghị na silicone nkịta na-adịghị mma na-enye nri nri silicone pet maka anụ ụlọ gị.
A na-eji ihe nchekwa silicone na-enye nkịta nri ọkwa nri, na okpomọkụ na-eguzogide okpomọkụ sitere na -40 ruo +240 degrees, ọ dị mma maka anụ ụlọ na-eri nri ọbụna ma ọ bụrụ na ha wụfuru na efere nri.
Mpempe nri nri silikone dị mfe iji mmiri ma ọ bụ akwa mmiri ihicha, ọ dịkwa mma nkesa efere.Ọ dị mfe ịchekwa, dị mma maka njem.Naanị tụgharịa mpempe nri na-agbanwe agbanwe, na-adịgide adịgide.
Nkịta jiri nwayọ feeder nnukwu efere silicone Pet Bowl/Efere anụ / nkịta na-akụda nnukwu efere Pet Feeder
NA-EKWU NDỊ NA-AKWỤKWỌ:Enwere ike ịsacha ma ọ bụ hichaa nnukwu efere ahụ na-adịgide adịgide mgbe ejiri ya.Ọzọkwa efere nri anụ ụlọ dị ogologo ndụ karịa ngwaahịa ndị ọzọ yiri ya.
Ọ dị mfe maka nchekwa na mbufe:Bowl ndị ahụ na-agụnye carabiners agba agba.Ị nwere ike kechie ya ma ọ bụ daa ya na akpa gị, obere akpa, akpa njem nkịta, leash ọzụzụ nkịta ma ọ bụ daa ala maka akpa gị, stroller, igbe uwe na ndị ọzọ!Anụmanụ dị egwu maka efere mmiri anụ ụlọ ma ọ bụ efere njem anụ ụlọ.
adreesị:Ime ụlọ 101, Ụlọ elu 1, Ụlọ 2, Mpaghara mmepụta ihe nke mbụ, Hengli Village, Hengli Town, Dongguan, Guangdong, China